Software Nzuzo Podcast - Foneelu Of The Day
E nwere ọnụ ọgụgụ nke azụmahịa azum depụtara ke ọzọ ase n'akụkụ webinars na akwụkwọ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọmụma banyere omenala software ulo oru i nwere ike mgbe niile na-ege ntị na software nzuzo podcast kere Russell Brunson mmekọ 'Garret Pierson, Scotty Brandley na Lindsay hailing.
The podcast si dị na iTunes, Google Play na Stitcher na ha kwurịta iche iche isiokwu hiwere na ojiji nke clickfunnels dị ka ụzọ isi mee ka a beta igba egbe webinar, ma ọ bụ isi ihe iche n'etiti azum awa na Software Secret akwụkwọ (uche nkewa, Lụtara elu na wireframing).
Ha na-enye pointers na-esi mee a n'ụzọ zuru ezu ọtọ Pụọ na page na ego nke ịdọ aka ná ntị chọrọ n'ezie ike software.
Ekwela ka gị enweghị nzuzo wizardry, ma ọ bụ eziokwu na ị na-adịghị a siri ike software echiche ịkwụsị gị ịdenye a free ọzụzụ. (Ị na-na na na otu ụgbọ mmiri dị ka onye ọ bụla ọzọ, na ha ga mee nile nke na isi-on!)
Ịdebanye aha maka FREE "Mee ma Ẹkedori Your Own Software Na The Next 90 Days "Ọzụzụ